အရွက်ခြောက်စက် - Twesix
သင်အဘို့အညာဘက်အရပျ၌ပါပဲ အရွက်ခြောက်စက်.ယခုအချိန်တွင်သင်ရှာဖွေထားပြီးမည်သည့်အရာကိုမဆိုသင်တွေ့ရှိရန်သေချာသည် Twesix.ကျနော်တို့ကဒီမှာပေါ်မှာကြောင်းအာမခံပါသည် Twesix.
သံမဏိပင်လယ်စာခြောက်စက်ထုတ်လုပ်သူ DPPG150s-x Tsix
Tsix မှငါးခြောက်စက်ကိုလေထုအရင်းအမြစ်အပူစုပ်စက်အပူပိုင်းစက်အဖြစ်ခေါ်ယူပြီးခြောက်သွေ့သောငါးများသို့သဘာဝလေကြောင်းလိုင်းများကိုတုပသည့်သဘာဝလေကြောင်းလိုင်းများကိုတုပသည်။ ပရိုတိန်း, ရေနံနှင့်အဆီကဲ့သို့သောပါဝင်ပစ္စည်းများသည်အပူချိန်မြင့်မားခြင်းကြောင့်အလွန်အမင်းပျက်စီးစေပြီးအစိုဓာတ်ကိုဖယ်ရှားရန်အလွန်ခက်ခဲသည်။ ငါးခြောက်စက်အနေဖြင့်ငါးခြောက်၏အရည်အသွေးနှင့်အာဟာရကိုအာမခံချက်ဖြင့်အာမခံသည်။ Tsix ရေအေးငါးခြောက်စက်သည် 25-75 ဒီဂရီ C လေထုကိုပျက်စီးစေနိုင်သည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ, ကျေးဇူးပြု. ကျွန်ုပ်တို့၏ရောင်းအားကိုဆက်သွယ်ပါ။အလုပ်သမားကုန်ကျစရိတ်သက်သာခြင်း - Twsix Seafood Dryer သည်အလုပ်သမားများစုဆောင်းခြင်း, သင်၏ပင်လယ်စာကိုခြောက်သွေ့စေရန်အတွက်ထိရောက်သောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ Twsix Seafood Dryer သည်အလုပ်သမားများစုဆောင်းသည့်ပစ္စည်းကိရိယာဖြစ်သည်။ သင်ဤစက်ကိုစနိုင်ပြီးသင်၏0န်ထမ်းများကိုအခြားအလုပ်များလုပ်နိုင်သည်။ ခြောက်သွေ့သောအပြီးသတ်ပြီးနောက်စက်သည်အလိုအလျောက်ရပ်တန့်သွားမည်အပူပြန်လည်ထူထောင်ရေး - Twsix Seafood Dryer ၏အပူပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ဆောင်ချက်သည်သင်၏ပင်လယ်စာကိုစွမ်းအင်နည်းစေနိုင်သည်။dehumidifier - ရေစင်မြင့်၏သက်တမ်းကိုရေကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်အစားအစာအရသာကိုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်ပင်လယ်စာထုတ်ကုန်များကိုတိုးချဲ့ရန်ထိရောက်သောနှင့်ချွေတာသောဖြေရှင်းချက်။ Twsix Seafood Dryer သည်သင်၏ပင်လယ်စာကိုခြောက်သွေ့စေရန်နှင့်ထိန်းသိမ်းရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် dehumidifier နှင့်အစားအစာချွေတာတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးခြောက်သွေ့သောစက်ဖြစ်သည်။
တရုတ်မှမွန်ဂိုလီးယားထုတ်လုပ်သူများထံစိတ်ကြိုက်ပင်လယ် buckthorn ခြောက်သွေ့စက်
Twesix သည်တရုတ်နိုင်ငံမှမွန်ဂိုလီးယားထုတ်လုပ်သူများထံမှမွန်ဂိုလီးယားထုတ်လုပ်သူများထံမှ စ. မွန်ဂိုလီးယားထုတ်လုပ်သူများထံမှလက်မှတ်များစွာကိုဖြတ်သန်းသွားခဲ့သည်စွမ်းအင်ချွေတာခြင်း - သင်၏အချိန်နှင့်ခွန်အားကို Twsix ပင်လယ် buckthorn ခြောက်သွေ့စက်ဖြင့်သိမ်းဆည်းပါ။ သင်၏ပင်လယ် buckthorns ကိုခြောက်သွေ့စေရန်နာရီများစွာကြာပြီးသင်၏အချိန်နှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုကယ်တင်လိမ့်မည်။ Twsix Sea Buckthorn ခြောက်သွေ့စက်သည်ခြောက်သွေ့သောစက်သစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးသစ်သီးခြောက်သွေ့မှုနည်းပညာလျှောက်လွှာမှ Twsix ကုမ္ပဏီမှတီထွင်ထားသောခြောက်သွေ့သောစက်အသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုသစ်သီးခြောက်သွေ့ရန်အသုံးပြုနိုင်သည်။လွယ်ကူစွာတပ်ဆင်ထားသည် - ခြောက်သွေ့သောအသီးများ, သင်ဤစက်ကို သုံး. ရေနံခြောက်သွေ့သောပင်လယ် buckthorn သို့သုံးနိုင်သည်။ စက်သည်တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည်။ ခြောက်သွေ့သောလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအချိန်တိုအတွင်းပြုလုပ်ပြီးသင်၏အချိန်နှင့်ငွေကိုချွေတာခြင်းဖြစ်သည်။Sea Buckthorn ခြောက်သွေ့စက်သည်စွမ်းအင်, လွယ်ကူစွာတပ်ဆင်ထားပြီးအရည်အသွေးမြင့်သံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ Sea Buckthorn ခြောက်သွေ့စက်ကိုမိုးလုံလေလုံနှင့်ပြင်ပဒေသများတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
Dehydrate မုန်လာဥ Chilli Tomatto Broccoli DPHG050S-G ထုတ်လုပ်သူများ - ဆ t
ဟင်းသီးဟင်းရွက်ခန်းခြောက်ခြင်း, လေကိုအပူ ပေး. ပူသောလေထုကိုခြောက်သွေ့စေရန်အပူချိန်, အပူချိန် 30-80 ℃။ပူပြင်းတဲ့အခြောက်ခံစက်ကဟင်းသီးဟင်းရွက်အမျိုးမျိုးကိုခြောက်သွေ့စေနိုင်ပါတယ်။ ခရမ်းချဉ်သီးခန်းခြောက်။ ရေခန်းခြောက်သောမုန်လာဥနီ။ ရေခန်းခြောက် broccoli ။ ငရုတ်ကောင်းငရုတ်ကောင်းခြောက်သွေ့။Twesix China 300 ကီလိုဂရမ်ပူပြင်းသည့်လေထုဟင်းသီးဟင်းရွက်ဟင်းသီးဟင်းရွက် TheMilli Tomatto Broccoli Broccoli Broccoli Broccoli Twesix, Twesix, Copeland Compressor နှင့် Schnelider Electronics Compronents
Apple Slices -DPHG050S-G ခြောက်သွေ့စေရန် TSIX အကောင်းဆုံးသစ်သီးခြောက်စက်
TSIX သစ်သီးခြောက်စက်မှပန်းသီးခြောက်နည်း။ ပန်းသီးကို ၅-၆ မီလီမီတာအတွင်းရှိအသားဖြုန်းစက်ထဲသို့ထည့်ခြင်း အပူချိန်ကို ၄၀ မှ ၇၀ ℃မှသတ်မှတ်ပြီးခြောက်သွေ့ချိန်ကို ၆ နာရီမှ ၈ နာရီအထိကြာအောင်။
Tsix Industrial Fruit Fruiter Machine သည်ခရမ်းချဉ်သီး Limon နှင့် Apple ကိုစက်ရုံဈေးနှုန်းနှင့်ပန်းခြံနှင့်ပန်းသီးနှင့်ပန်းသီးနှင့်ပန်းသီးနှင့်ပန်းသီးများကိုစိုစွတ်စေသည်
အစားအစာမှသင်၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်သစ်သီးခြောက်စက်စက်ကိုလိုချင်ပါသလား။ သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးအစားအစာရေဓာတ်ခန်းခြောက်သောစက်များရှိသည်။ ၎င်းသည်အစားအစာများ, ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ, အသား, အသားများ, ငါးများစသည်တို့ကိုအစားအစာများ, ခြံများ, ဈေးဆိုင်များ, စားသောက်ဆိုင်များနှင့်သင့်တော်သည်။ ပိုမိုနည်းပညာဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များ, PLS ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။
အပူခန်းခြောက်စက်နှင့်အာလူးကြော် DPHG0808080S-G TSIX မှအပူခန်းခြောက်စက်
ကမ္ဘာပေါ်တွင်ခေါက်ဆွဲကိုအဓိကအားဖြင့်ဆန်, အာလူးနှင့်ဂျုံမှုန့်မှုန်ကိုပြုလုပ်သည်။ ထို့ကြောင့်ဆန်ခေါက်ဆွဲ, အာလူးခေါက်ဆွဲ, paste သို့မဟုတ် spaghetti.if သည်မတူညီသောခေါက်ဆွဲများခြောက်သွေ့ခြင်းနှင့်အပူချိန်ကဲ့သို့သောခြောက်သွေ့ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည်ကွဲပြားခြားနားသည်။ Tsix Noodle ခြောက်သွေ့စက်ကို dehydrator များသည်အနိမ့်အမြင့်နှင့်အလယ်အလတ်ပုံစံကိုခေါက်ဆွဲထားသည့်အပူပိုင်းခေါက်ဆွဲကိုအပူ သုံး. ခေါက်ဆွဲ။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏ Noodle dehydrator သည် dehumiding funtion ကိုရှိသည်။ ဒါကြောင့်ခေါက်ဆွဲ၏အရည်အသွေးအာမခံနိုင်ပါတယ်။ ငါတို့ရဲ့ခေါက်ဆွဲခြောက်စက်ကခြောက်သွေ့တဲ့ခေါက်ဆွဲက nutiriitions တွေကိုမပြောင်းလဲဘူး, အရသာကပိုကောင်းတယ်။
Mobile 304 Bakery Trolley ထိန်သိမ်း
ပစ္စည်းများ: 201 သို့မဟုတ် 304 သံမဏိ (အစားအစာတန်း), အရွယ်အစား: 810 * 770 * 1750mm.t.t.mm.tray အရွယ်အစား - 600 * 400mm, အရေအတွက် - 32 ခု - 32 ခု - 32 ခု။ Max အလေးချိန်: 500 ကီလိုဂရမ်။ သိုလှောင်ခြင်းနှင့် tritpoart အတွက်အကောင်းဆုံးကား trolley သည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုကျောင်းများ, ဆေးရုံများ, မုန့်ဖုတ်ဆိုင်များ, စားသောက်ဆိုင်များ, စားသောက်ဆိုင်များ, ဟိုတယ်များတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသည် OEM နှင့် ODM အမှာစာများကိုလက်ခံနိုင်သည်။ Trolley ကိုပြင်းထန်သောနှင့်ကြာရှည်ခံနိုင်သည့်ခိုင်လုံသောသံမဏိဖြင့်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ဆုံလည်ရဲတိုက် (2) ခု (ဘရိတ် 2) ကိုသင်အလွယ်တကူသယ်ယူပို့ဆောင်နိုင်အောင်ကူညီလိမ့်မည်။
Foshan Shunde Twesix စွမ်းအင်ကုမ္ပဏီ Foshan Shunde Twesix Energy Co. , Ltd
Twesix ၏အရည်အသွေးမြင့်သောအစားအစာထုတ်လုပ်သည့်စက်များ - အိုမန် Shunde Twesix စွမ်းအင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်, Ltd, Copeland Compressror နှင့် Schneland Electrons
စားနပ်ရိက္ခာရေဓာတ်ခန်းခြောက်စက်နှင့်အခြားအစိတ်အပိုင်းများကိုအထပ်သားနှင့်ကတ်ထူပြားများဖြင့်ထုပ်ပိုးပြီးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကာလအတွင်းချိုးဖောက်ခြင်းကိုရှောင်ရှားနိုင်သည်။အစားအစာခြောက်သွေ့စက်သည်သစ်သီးများ, ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်အသားများစသည့်အစာကိုခြောက်သွေ့စေသောစက်ဖြစ်သည်။ Twsix Food Drying Machine သည်အောက်ပါအင်္ဂါရပ်များဖြင့်အဆင့်မြင့်စားသောအစားအစာခြောက်သွေ့စက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ပေါင်မုန့်, ​​ခေါက်ဆွဲ, ကွတ်စ်လက်ထောက်များ, အစာ, ဆန်, သစ်သီးများ, ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ, Twsix အစားအစာခြောက်သွေ့စက်သည်အစားအစာရှားပါးမှုပြ problem နာကိုဖြေရှင်းပြီးဘဝအရည်အသွေးကိုတိုးတက်စေသည့်ကိရိယာများဖြစ်သည်။ Twsix Beder Drying Machine သည်နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များသို့တင်ပို့ရန်အစားအစာခြောက်သွေ့စေရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောကိုယ်ပိုင်ပါ0င်သောစက်ဖြစ်သည်။
32 ဗန်းနှင့်အတူသံမဏိ Bakery trolley